Walgahii marii Hogganni ABO hawaasa magaalaa Jimmaa wajjiin guyyaa arraa taasisan irratti qaarree fi qeerroon bifa kanan qooda fudhatani jiran. Kichuu
[ April 10, 2020 ] Oromiyaa keessatti lammiin Oromoo wareegamaa jiran hedduu dha.	News
[ April 10, 2020 ] Ethiopian:የብልፅግና አመራር ነብዩ ስሁለሚካኤል አቶ ጌታቸው ረዳ የሰጡት የመልስ ምት	Videos
[ April 10, 2020 ] Fauci: Coronavirus immunity cards for Americans are ‘being discussed’	Videos
[ April 10, 2020 ] Finfinnee( Addis Ababa)! Dhagayaatii Wal Dhageessisaa!!	News
[ April 10, 2020 ] Hiccitii diini Oromoo fi Oromiyaa diiguuf Mootummaa Itoophiyaatiin	News
[ April 10, 2020 ] Killing 200 Amhara youth-only quickness empire Ethiopia’s	Videos
[ April 10, 2020 ] Maalif abbaa Gadaa balleessaa malee hiitu jennee iyyaannoo	News
[ April 10, 2020 ] Inside the mysterious Wuhan virus lab: Rare pictures show	Health
[ April 10, 2020 ] Ethiopia’s small numbers of detected cases have only to do with the smaller numbers of cohort cases that they have been following up.	TV
[ April 9, 2020 ] Who is Racist!Leaders of world organizations ..	Health
HomeAfaan OromooNewsWalgahii marii Hogganni ABO hawaasa magaalaa Jimmaa wajjiin guyyaa arraa taasisan irratti qaarree fi qeerroon bifa kanan qooda fudhatani jiran.
Walgahii marii Hogganni ABO hawaasa magaalaa Jimmaa wajjiin guyyaa arraa taasisan irratti qaarree fi qeerroon bifa kanan qooda fudhatani jiran.
HALAGAAN dhaaba hedduu , yeroo bulchiinsa isaanii garagaraa sanitti ,oromoo irratti fe’uun dirqiin fudhachiisaa turaniiru.
Garuu immoo kan hanga hardhaa umriin dheeratee turee hardha gahe hin garre.
ABO duula waggoota 49 oliif irrattii godhamaa ture hundaa injifatee, saba isaatiin tikfamee hardha gahee jira.
Amma boodallee ABOn dhimma saba baldhaa , ta’ee, itti gaafatamummaafii qooda nurraa eeggamuu bahachuuf oromoo ta’uu qofaan muudamnee jirra.
1. ABOn WAADAA fii AMAANAADHA.
2. ABOn saba oromoof dhaaba qofaas miti, hafuura jireenyaati.
3. KAAYYOO qabsaabota hanga hardhaa oromummaaf wareegamaniiti.
4. Yaadanoo qabsaahoota lubbuun dhabamaniitii
5. muldhistuu eenyuummaa oromooti.
6. ASHAARAA guddicha ABBOOTA KEENYAATI
7. dadhabii hayyoota, baratootaafii gootoota miliyeena 60ti.
8. qabbaneessoo sabaa, dhukkuba guddaa warra jibbaa oromootiin guuttamaniiti.
9. KABACHIISAA eenyummaa; daangaa fii qabeenya oromummaaf guutuu oromiyaati.
10. ABOn, daawwitii guddichaaf ifaa guddicha BILISUMMAA walii galaa saba kana goonfachiisuudha.
11. ABOn wabii saba baldhaa oromoofii oromiyaati.
12. ABOn ilma HANGAFAA saba kanaati.
Waajjira ABO Finfinnee,Boolee. Namoonni Finfinnee Kutaa Magaalaa Boolee fi Naannawaa ishii jirtan waajjira ABO achi jirutti dhimma ba’uu dandeessu. Iddoon: Finfinnee, K/B/M/Boolee, Aanaa 11 keessa Addabaabaayii Gooroo Gamoo Hilliinaa darbii 4ffaa irra.
Seensa Sagantaa Jawar Manchester, UK
OMN: ልዩ ዝግጅት፣ ቆይታ ከኦፌኮ ና ኦነግ አመራሮች ጋር (December 01, 2019)
Oromiyaa keessatti lammiin Oromoo wareegamaa jiran hedduu dha.
Ethiopian:የብልፅግና አመራር ነብዩ ስሁለሚካኤል አቶ ጌታቸው ረዳ የሰጡት የመልስ ምት
Fauci: Coronavirus immunity cards for Americans are ‘being discussed’
Finfinnee( Addis Ababa)! Dhagayaatii Wal Dhageessisaa!!
Hiccitii diini Oromoo fi Oromiyaa diiguuf Mootummaa Itoophiyaatiin
Killing 200 Amhara youth-only quickness empire Ethiopia’s
Maalif abbaa Gadaa balleessaa malee hiitu jennee iyyaannoo
Inside the mysterious Wuhan virus lab: Rare pictures show
Ethiopia’s small numbers of detected cases have only to do with the smaller numbers of cohort cases that they have been following up.
Who is Racist!Leaders of world organizations ..
Taiwan details aid to Ethiopia in wake of WHO head criticism
Nuti gabrummaa jibbina malee, gabroota hin jibbinu.
Dr. Fauci says coronavirus antibody tests are ‘days or weeks away’
WHO chief addresses death threats and racist insults:
The United States Kissinger Report on Africa’s Depopulation Policy
COVID-19: WHO boss calls for ‘honest’ leadership from US, China
Tokkummaa Tuujjoo Nu fakkaachaa New Oromo Music 2020. Official Video.
Beekii Kuree Sifanitoo New Oromo Music 2020
Gadaa Hamdaa-Yaa Rabbi New Ethiopian Oromo Music 2020
Worried that $2 trillion law wasn’t enough, Trump and congressional